Tababare Solskjaer oo Doortay Kabtankiisa joogtada ah ee Manchester United – Gool FM
(Manchester) 29 Dis 2018. Tababaraha ku meel gaarka ah ee Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa doortay kabtanka sida joogtada ah usii hogaamin doona kooxda inta uu isagu macalinka ka yahay Old Trafford.
Antonio Valencia oo awalba ahaa Kabtanka kooxda ayuu Solskjær xaqiijiyay in isla isaga uu jagadaas sii heyn doono.
33-jirka ayaa waqtiyo kala duwan oo xilli ciyaareedkan ah la dhibtoonayay dhaawacyo kubka iyo jilibka ah, laakiin weli way ku adkaatay inuu boos joogta ah helo markuu taam soo noqday, isagoona ciyaaray todobo kulan oo qura isku dar.
Kulankii ugu dambeeyay uu ciyaaro Valencia ayaa ahaa guul daradii 2-1 ay kala kulmeen kooxda Valencia tartanka Champions League, halka Premier League ay ugu dambeysay ciyartii ay bar baraha 1-1 la galeen Wolves bishii September.
Tababaraha Cusub ee Red Devils Solskjaer ayaa labadii kulan uu hogaamiyay kooxda garabka midig u kala isticmaalay Ashley Young iyo Diogo Dalot, balse wuxuu iminka qishay inuu dib ugu yeeri karo Valencia markuu si taam ah u soo kabto.
“Antonio waa Kabtanka kooxda marka uu taam yahay uuna ciyaarayo, isaga ayaa xiran doona calaamada Kabtannimada,” Solskjaer ayaa sidaa yiri ka hor kulanka axada ay ku wajahayaan Bournemouth.
Suarez, Griezmann iyo Xarfaan kale oo badan oo ka qeyb galay AROOSKA Kabtanka Atletico Madrid Godin iyo Laacibka oo Hadiyadaha Arooskiisa oo Idil ku bixiyay......+SAWIRRO